Circuit Breaker ၏ ရွေးချယ်မှု အစိတ်အပိုင်းများ - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd
ရွေးချယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများcircuit breaker
1. circuit breaker ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် circuit breaker အတွင်းရှိ trip unit မှ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်သည့် Current ကို ရည်ညွှန်းသည်၊circuit breakerခရီးယူနစ်။ တူညီသောစီးရီးတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေစီးကြောင်းများစွာရှိပြီး တူညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရေစီးကြောင်းများစွာရှိသည်။ အရွယ်အစားနှင့် ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု ပမာဏcircuit breakerတူညီကြသည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ရွေးချယ်သောအခါတွင်၊ မော်ဒယ်သည်သတ်မှတ်ထားသော shell frame ၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စီးကြောင်းအတွင်းရှိ circuit breaker ၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စီးကြောင်းကိုလုံးဝဖြည့်ရပါမည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကို ဦးစားပေးဖော်ကိန်းအရ ရွေးချယ်သည်- တစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် circuit နှင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ အများဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် ဝါယာကြိုးများကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန် စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ခရီးစဉ်ယူနစ်၏ လက်ရှိဆက်တင်တန်ဖိုးသည် ခရီးယူနစ်အား လည်ပတ်နေသော လက်ရှိတန်ဖိုးသို့ ချိန်ညှိထားကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် လည်ပတ်နေသော လက်ရှိတန်ဖိုးဖြစ်သည့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ In ၏ များပြားမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ ယနေ့ခေတ်၊ အချို့သော အီလက်ထရွန်နစ် ခရီးစဉ်များအတွက်၊ overload long delay rated current ကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ ချိန်ညှိထားသော လက်ရှိသည် အမှန်တကယ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်သော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိဖြစ်သည်။ အများဆုံးလက်ရှိ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်လက်ရှိသည် အဆက်အသွယ်များ၏ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် အချို့သော အလုပ်လုပ်သည့် ဗို့အားအောက်တွင် ရှိနေသည့်အချိန်တွင် ဖြစ်သည်။circuit breakerအရန်အဆက်အသွယ်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် 3A သို့မဟုတ် 6A ဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှု ဆားကစ်များအတွက် အသုံးပြုသည်။
2. အဆင့်သတ်မှတ် လျှပ်ကာဗို့အား
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အားသည် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဗို့အားတန်ဖိုးဖြစ်သည်။circuit breaker၊ ဤတန်ဖိုးကို ကိုးကား၍ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် တွားသွားခြင်းအကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ အချို့သော circuit breaker များသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အားကို မသတ်မှတ်ထားဘဲ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကို rated insulation voltage အဖြစ် မှတ်ယူသင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အားထက် မကျော်လွန်ပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အားcircuit breakerနှင့် power frequency test ဗို့အား။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား ဆိုသည်မှာ ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဖောက်ထွင်းနိုင်စွမ်းအားနှင့် အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗို့အားတန်ဖိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။ ပုံသွင်းထားသော case circuit breakers များ များ များ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အားမှာ အများအားဖြင့် 50Hz၊ 380V၊ သို့သော် 50Hz၊ 600V နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် 380V၊ 50Hz circuit breakers များ များ များကိုလည်း လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဗို့အား 660V သို့မဟုတ် 1140V သို့။
rated control power supply voltage သည် voltage ဖြစ်သည်circuit breakershunt release နှင့် motor-drive ယန္တရား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားသည်။ AC နှင့် DC ဗို့အားနှစ်ခုရှိသည်။ ရွေးချယ်သည့်အခါ AC သို့မဟုတ် DC ကိုညွှန်ပြရန်သေချာပါစေ။
3. အဆုံးစွန်သော တာတိုပတ်လမ်းဖောက်ထွင်းနိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အဆုံးစွန်သော တိုတောင်းသောပတ်လမ်းဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်သည် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင် ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုအား ရည်ညွှန်းသည်။ သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊circuit breakerအမှန်မှာ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိကို ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် လည်ပတ်မှုတို-ပတ်လမ်းဖောက်ထွင်းနိုင်မှုအား သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင် ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုအား ရည်ညွှန်းသည်။ သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာပြီးနောက်၊ circuit breaker သည် ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
4. တွယ်တာမှု လုပ်ဆောင်ချက်
circuit breaker လုပ်ဆောင်ချက်၏ ဆင်းသက်လာပြီး ဖြည့်စွက်အဖြစ်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများကို ပေါင်းထည့်ကာ ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ချဲ့ထွင်သည်။circuit breaker. ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် အရန်အဆက်အသွယ်များ၊ အချက်ပေးအဆက်အသွယ်များ၊ shunt ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ခရီးစဉ်ယူနစ်၊ လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား၊ ပြင်ပလှည့်ပတ်လည်ပတ်မှုလက်ကိုင်ကဲ့သို့သော လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် circuit breaker ၏ ခွဲလို့မရနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
(1) Auxiliary contacts များ၏ အဖွင့်နှင့် အပိတ် အခြေအနေကို ပြသရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။circuit breakerဒါပေမယ့် ချို့ယွင်းချက် ပျက်သွားသလား မပြနိုင်ပါဘူး။ ၎င်းသည် circuit breaker ၏ control circuit သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ circuit breaker shell frame ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် single break point changeover contact အဖြစ် 100 ဖြစ်ပြီး 225 Bridge contact structure နှင့် အထက်တွင်၊ သဘောတူထားသည့် heating current သည် 3A; အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ 400 နှင့်အထက်ဘောင်အား ပုံမှန်အဖွင့်နှစ်ခုနှင့် ပုံမှန်အပိတ်နှစ်ခုဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး သဘောတူထားသည့် အပူလျှပ်စီးကြောင်းမှာ 6A ဖြစ်သည်။
(၂) အချက်ပေး အဆက်အသွယ်ကို အဓိကအားထား၍ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီးထွက်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုသည်။circuit breakeroverloaded၊ short-circuited သို့မဟုတ် under-voltage။ နှိုးစက်အဆက်အသွယ်၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုလျှပ်စီးကြောင်းမှာ- AC380V၊ 0.3A၊ DC220V၊ 0.15A၊ ယေဘုယျအားဖြင့် 1A ထက်မပိုဘဲ၊ အပူလျှပ်စီးကြောင်းသည် 1 မှ 2.5A အတွင်းရှိနိုင်သည်။
(၃) shunt release သည် အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့် အဖွင့်အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဗို့အားသည် main circuit voltage နှင့် သီးခြားဖြစ်နိုင်သည်။ shunt release သည် အချိန်တိုအတွင်းလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး coil energization time သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 1s ထက်မပိုနိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက coil လောင်ကျွမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကွိုင်မလောင်ကျွမ်းစေရန်အတွက်၊circuit breakershunt release coil နှင့် အတွဲလိုက် micro switch ကို ချိတ်ဆက်သည်။ shunt ထုတ်လွှတ်မှုကို အားဖြည့်သောအခါ၊ armature သည် ဆွဲယူသွားပြီး shunt release ၏ power supply ကြောင့် ပုံမှန်အပိတ်မှ ပုံမှန်အဖွင့်သို့ micro switch သည် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ခလုတ်ကို အတုအယောင် နှိပ်လိုက်လျှင်ပင် ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းကို ဖြတ်လိုက်သည်၊ shunt coil သည် အမြဲတမ်း အားမပြည့်တော့ပါ။ ကွိုင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန်၊ circuit breaker ကို buckled လုပ်ပြီး ပြန်ပိတ်သောအခါ၊ micro switch သည် ပုံမှန်အတိုင်း ပိတ်သည့် အနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။ shunt ထုတ်လွှတ်မှုတွင် အမျိုးမျိုးသော ထိန်းချုပ်ဗို့အားများနှင့် မတူညီသော ပါဝါကြိမ်နှုန်း ပါရှိပြီး မတူညီသော အချိန်များနှင့် မတူညီသော ပါဝါရင်းမြစ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၄) လျှပ်စီးအောက်လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုကို ဆားကစ်နှင့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ ရေရှည်ဗို့အားကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသည့်အခါ၊ undervoltage release coil သည် power supply side နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။circuit breaker. လျှပ်စီးဓာတ်အား ထုတ်လွှတ်ပြီးပါက ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအား ပိတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက circuit breaker သည် ပိတ်သွားနိုင်သည်။ တံခါးမရှိ။ အသုံးပြုသူသည် လိုင်း၏အလုပ်လုပ်သောဗို့အားနှင့် undervoltage ထုတ်လွှတ်မှုတို့သည် တသမတ်တည်းဖြစ်မဖြစ် အတည်ပြုသင့်သည်။ undervoltage ၏လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာသည် (70%ï½ž35%)Un ဖြစ်သည်။ undervoltage release တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ဗို့အားအမျိုးမျိုးနှင့် မတူညီသော ပါဝါကြိမ်နှုန်းများပါရှိပြီး မတူညီသောအချိန်များနှင့် မတူညီသော ပါဝါအရင်းအမြစ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(5) လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား၏အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။circuit breakers များ များအဝေးထိန်းအပိတ်နှင့် အဖွင့်အတွက်။ လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရားနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လည်ပတ်မှုယန္တရား နှစ်မျိုးရှိသည်။circuit breakers များ များ400A နှင့်အထက်ဘောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရေစီးကြောင်းများဖြင့်၊ 225A နှင့်အောက်ဘောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရေစီးကြောင်းများရှိသော circuit-breakers များအတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက်လည်ပတ်မှုယန္တရားသည် သင့်လျော်သည်။
Circuit Breaker ၏ ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် ၁